Fampanantenana ataony mihitsy ny hanafoanana ny hetsika fanenjehana dahalo ampanaovin’ny fanjakana ny andia-miaramila ao anatin’ny ZRPS “Zones rurales prioritaires de sécurité” izay nahatafaverina ny filaminana any amin’io distrika io ankehitriny. Tsy mifanandrify amin’ny hetahetam-bahoaka ny fikasany ka mitady hampanjaka ny fitsaram-bahoaka aminy izy ireo satria tezitra mafy. Mahatsiaro ho very tombontsoa amin’ny hetsika fanenjehana dahalo atao ity kandida ity ka ny mponina no ataony sorona. Tsiahivina fa izy io no mpitantana ny “Dina Fitambarambentsoa” izay nandray ny dahalo niova fo tanatin’ny “kalôny” niandraikitra ny fampandrian-tany tamin’ny taona 2015 tany Miandrivazo. Niverina ho dahalo anefa ireo “kalôny” ireo ka nandripaka tao an-tanàna hanaratsiana ny “Dinan’i Menabe” izay nankatoavin’ny fitsarana hasolo azy taty aoriana.